“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख १४ गते शनिबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल” – Etajakhabar
मंगलबार, जेठ ०७, २०७६ | Tuesday, May 21, 2019
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख १४ गते शनिबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग श्रीसूर्य उत्तरायण,वसन्तर्तुः,परिधावी नाम संवत्सर,शाके १९४१,सम्वत २०७६ साल वैशाख १४ गते शनिबार नेपाल सम्बत ११३९ चौलागा,सन् २०१९ अप्रिल २७ तारिक कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि अपरान्ह ५ वजेर ५५ मिनेटसम्म,श्रवण नक्षत्र राती ३ वजेर ३ मिनेटसम्म,शुभयोग,कौलवकरण,आनन्दादियोग आनन्द,सूर्य मेष राशीमा,चन्द्रमा मकर राशीमा ।
मुहूर्त – शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷३५ वजेबाट मध्यान्ह १२÷२८ वजेसम्म रहनेछ । सामान्य गुली काल मुहूर्तः–विहान ५÷३१ वजेबाट ७÷८ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ राहुकाल मुहूर्तः–विहान ८÷४६ वजेबाट १०÷२४ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः–अपरान्ह १÷४० वजेबाट ३÷१८ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ दूरमुहूर्तः–विहान ७÷१४ वजेबाट ८÷६ वजेसम्म रहनेछ ।
बार वेला – सूर्योदयबाट प्रातः ७÷८ वजेसम्म काल वेला,७÷८ वजेबाट ८÷४६ वजेसम्म शुभ वेला,८÷४६ वजेबाट १०÷२४ वजेसम्म रोग वेला,१०÷२४ वजेबाट १२÷२ वजेसम्म उद्वेग वेला,१२÷२ वजेबाट १÷४० वजेसम्म चर वेला,१÷४० वजेबाट ३÷१८ वजेसम्म लाभ वेला,३÷१८ वजेबाट ४÷५६ वजेसम्म अमृत वेला र ४÷५६ वजेबाट सूर्यास्तसम्म काल वेला रहनेछ ।
बार वेला – सूर्यास्तबाट ७÷५६ वजेसम्म लाभ वेला,७÷५६ वजेबाट ९÷१८ वजेसम्म उद्वेग वेला,९÷१८ वजेबाट १०÷४० वजेसम्म शुभ वेला,१०÷४० वजेबाट १२÷२ वजेसम्म अमृत वेला,१२÷२ वजेबाट १÷२४ वजेसम्म चर वेला,१÷२४ वजेबाट २÷४६ वजेसम्म रोग वेला,२÷४६ वजेबाट ४÷८ वजेसम्म काल र ४÷८ वजेबाट सूर्योदयसम्म अमृत वेला रहनेछ । शुभाशुभ“जीवानां जगताम् चैव सर्जक पालक प्रभु । वरद सुखदो नित्यम् सर्वान् रक्षतु सर्वदा । ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति”।
मेषः– समयले साथ दिनेछ । रोकिएका काम अगाडि बढ्ने छन् । नयाँ कामको अवसर आउन सक्छ । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा नयाँ सम्भावना देखिने छन् । कुरा भन्दा काममा जोड दिनु होला ।
वृषः– समयले विस्तारै साथ दिनेछ । भाग्यमा भन्दा कर्ममा जोड दिनु होला । बाह्य काममा समय बढि खर्च हुनेछ । गरेका धेरै जसो क्रमिक रुपमा सफल हुनेछन् । गुमेको आस्था र विश्वास थोरै पलाउने छ ।
मिथुनः– सोचे जस्तो,गरेर गरे जस्तो कहि कतै हुने देखिन्न । शारीरिक एवं मानसिक दूर्वलता बढ्नेछ । विभिन्न खालका समस्या सँग भिड्नु पर्नेछ । दैनिक काम काजमा अवरोध आउने देखिन्छ । आस्था घट्नेछ ।
कर्कटः–विचारमा परिवर्तन आउनेछ । समयमा कार्य सम्पादन गर्नु होला नत्र पछि रोकिने छन्,विभिन्न समस्या आउने छन् । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य लाभ हुनेछ । आफन्तको सहयोग थोरै मिल्नेछ ।
सिंहः– पछाडि आफ्नै मान्छेले प्रहार गर्न सक्छन् सवैलाई आन्तरिक कुरा नखोल्नु होला । काम गर्दा विभिन्न समस्या झेल्नु पर्नेछ । प्रयत्न नगरि कुनै काम बन्ने छैनन् । मेहनतको अन्तिम परिणाम सुखद रहनेछ ।
कन्याः– निणर्य क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ जसका कारण कामबाट फाइदा लिन सकिने छैन । यात्रामा कठिनाइ उत्पन्न हुनसक्छ । काम गर्दा सन्तुलन राखेर गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट अल्प लाभ हुनेछ ।
तुलाः– घरयासी समस्याबाट पीडित हुनु पर्नेछ । अनावस्यक झन्झट आइलाग्ने छन् । भौतिक सम्पति चोरी, हराउन वा नास हुनसक्छ सतर्क रहनु होला । शारीरिक शिथिलता बढ्ने देखिन्छ ।
वृश्चिकः– समयमा गरेका काम सफल हुनेछन् । गरेका कामबाट लाभान्वित पनि हुनुहुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । सवै सहयोगि हुने छैनन । आफन्तबाट सहयोग मिल्नेछ ।
धनुः– आफुले सोचे जस्तो दिन छैन ,ऋण लगानी गर्दा विचार पु¥याउनु होला । आफन्तको धेरै भर नपर्नु होला धोका हुनसक्छ । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम भने सफल हुनेछन् । व्यापारबाट सामान्य आम्दानी बढ्नेछ ।
मकरः– शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ । काममा देखिएका समस्या कम भएर जाने छन् । कार्य क्षमता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ । पारिवारिक सुख मिल्नेछ । सहयोगी मिल्नेछ ।
कुम्भः– समयले साथ कम दिनेछ । गलत ठाँउमा लगानी हुनसक्छ,जोखिम मोलेर काम नगर्नु होला । अनावस्यक खर्चमा वृद्धि हुनेछ । विश्वास गरेकाले धोका दिन सक्छन् । व्यर्थको घुमाई फिराई हुनेछ ।
मिनः– काम गर्ने उत्साहा बढ्नेछ । नसोचेका ठाँउबाट धन आउनेछ । गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट पनि आम्दानी बढ्नेछ । घर परिवारबाट सहयोग सुख शान्ति मिल्नेछ । मांगलिक काम हुनेछन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १३, २०७६ समय: २०:२३:३७
पशुपतिनाथ सबैको कल्याण गरुन : २०७६ साल वैशाख २१ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख १७ गते मँगलबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख १६ गते सोमबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख १५ गते आइतबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! यो साता तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल वैशाख १४ गते देखि २० गतेसम्मको
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख १३ गते शुक्रबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख १२ गते विहिबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख ११ गते बुधबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७६ साल वैशाख १० गते मँगलबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
अन्जना हत्याराको अन्तिम पोष्टमाटम बाहिरियो,किन बोल्न चाहिनन उज्वलको श्रीमती मिडियामा ?
नेपालको पहिलो करोडपतिले अहिले सम्म फेसबुक चलाउन जान्दैनन !बिजेताले खोले करोडपति जित्नुको भित्री रहस्य
पाँचथरको मिक्लाजुङ दुई परिवारका नौ जनाको विभत्स हत्या (भिडियो सहित)
आयो परदेशिहरुलाई रूहाउने सन्तु थापाको आवाजमा मार्मिक लोक गीत (हेर्नुहोस)
फेरी लोक गायक हिमाल घले र मिन खातीले गाएको आयो दमदार दोहोरी गीत
चर्चित गायिका सुनिता कार्की सगको रमाइलो कुराकानी (भिडियो सहित )
एनस राई ट्युमर तथा क्यासर जस्ता रोग बाट पिडित छन सहयोगको अपिल (भिडियो सहित )
लुट्न सके लुट कान्छा पछिकै आयो अर्को रगत तताउने उत्कृष्ट गीत!हेर्नुहोस
राजधानीमै भेटिए चौरै भरी ग्याँसै ग्याँस : स्थानियले पकाए सिलिण्डर बिनै दाल भात, हेर्नुहोस (भिडियो सहित)